Fantaro i Israel Quic, mandray ny kaonty Twitter @ActLenguas mandritra ny herinandron’ny 25-31 marsa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2019 4:58 GMT
Sary nomen'i Israel Quic.
Mandritra izao taona 2019 izao izahay manasa olona maro hifandimby hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas (Fahavitrihana ara-piteny) sy hizara ny niainan-dry zareo tamin'ny famelomana indray sy tamin'ny fampiroboroboana ny fitenin-drazan-dry zareo. Miresaka momba an'i Israel Quic (@maisquick) ity lahatsoratra ity sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiatrano azy.
Israel Quic no anarako ary fiaviana Mesoamerikana avy amin'ny vahoaka Maya Tz'utujil aho, ary monina amoron'ny farihy Atitlán ao Goatemalà. Maya Tz'utujil ny fiteniko izay voatahirin'ny olondehibe sy ny zokiolona tsara, saingy nanomboka very teo amin'ny tanora sy ny ankizy.
Manomboka miditra amin'ny aterineto ny taranaka vaovao, saingy tsy mahita torohay amin'ny fitenin-dry zareo , ka tena ilaina ny mamokatra fitaovana nomerika amin'ny fiteny Maya Tz'utujil mba hahatonga azy ireny ho hita an-tserasera. Asa goavana dia goavana tokoa izany satria efa nanazatra anay hitroka amin'ny teny espaniola ny rafitra ary noho ny fahakamoan'ny atidoha, dia ny vaovao amin'ny teny espaniola no manintona anay kokoa noho ny vaovao amin'ny tenin-drazana.
Mandritra ity herinandro ity aho te-hizara ireo vokatra isankarazany natsangan'ireo fiarahamonina Tz'utujil mombany fiteny, ny natiora, ary ny kolontsaina.
RV: Inona ny fandrisihana lehibe indrindra amin'ny fahazotoana ara-nomerika anananao amin'ny fiteninao? Inona ny fanantenanao sy ny nofinofinao amin'ny fiteninareo?
Tiako ny Maya Tz'utujil hahatohitra ireo tsindrin'ny fanesoran-kolontsaina sy ny fitelemana ataon'ny rafitra mpanavakavaka sy mpanilikilika goatemalteka. Voatahiry nihoatra ny 500 taona ny kolontsaina sy ny fiteny. Manantena aho fa afa-miaina sy misitraka ny fototra niaviana ny taranaka manaraka.